Uyigcina njani iwebhusayithi kwiiFavorites ngokulula nangokukhawuleza | Ndisuka mac
Uyigcina njani iwebhusayithi kwiiFavorites ngokulula nangokukhawuleza
Enye yezenzo esihlala sizenza kwizihlandlo ezininzi xa sihleli phambi kweMac kukugcina iidilesi, amakhonkco onxibelelwano lwentlalo okanye nayiphi na i-URL enomdla kuthi kwi-Favorites bar. Ngale ndlela sinokhetho oluninzi olukhoyo lokuwenza umsebenzi, kodwa iqhinga elincinci ebelisoloko ndilisebenzisa tsala kwaye ugcine. Ewe kulula kakhulu ukugcina idilesi yewebhu okanye ikhonkco ngale ndlela kwaye yenza ukuba kube lula kakhulu kuthi kunye nokubonelela ngenkqubela phambili kunye nokuphucula imveliso, ke masihambe neli qhinga lincinci nelilula.
Njengoko benditshilo ekuqaleni kulula nje nge beka isikhombisi ngaphezulu kwedilesi kwaye utsalele ngqo kwicala lasekhohlo lesikrini, Izinto ozithandayo ziya kuvulwa ngokuzenzekelayo kwaye singagcina idilesi. Kule meko, nje ukuba sigqibe kwelokuba kwiiFavorites zethu siya kugcina idilesi yewebhu, ifolda okanye efanayo konke okufuneka ukwenze kukuyeka kwaye uhambe. Xa sifikelela kwiiFavorites siya kuba nekhonkco eligciniweyo.
Kule meko, kulungile ukuphawula ukuba ukuba besikhe savula iiFavorites ukhetho kwaye sayishiya kuluhlu lokufunda, xa sirhuqa ikhonkco kwicala lasekhohlo, "Uluhlu lokuFunda" luvula kwaye asizokwazi ukuyongeza kwibhokisi yeeFavorites, iyakusivumela ukuba siyigcine ngokuthe ngqo kolu luhlu lokufunda. Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu sele nilazi eli qhinga lincinci lisivumela ukuba songeze idilesi yewebhu yephepha okanye nayiphi na ikhonkco esiyifumana kumnatha ngokuthe ngqo kwiiFavorites zethu ngokukhawuleza nangokulula, kodwa kunokwenzeka ukuba abasebenzisi abaninzi bebengazi ngale ndlela ngokufanelekileyo ukugcina iidilesi kwibha yeeFavorites.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyigcina njani iwebhusayithi kwiiFavorites ngokulula nangokukhawuleza
I-Apple Pay inokuba nenkonzo yayo yokuhlawula phakathi kwabasebenzisi
Dlulisa iividiyo zakho ukusuka kwi-Mac ukuya kwiChromecast kunye nesicelo esitsha: iCast yeChromeCast